Laptọọpụ ndị China kacha mma nke 2022, nke ị ga-ahọrọ?
Ọtụtụ afọ gara aga, e mere teknụzụ na mba ndị dị ka United States ma rụpụta ya na mba Eshia. N'oge na-adịghị anya, ọ bụ Japan malitere ịmepụta ezigbo ngwá electronic, ma ụlọ ọrụ na-adị na China mgbe niile. Obere oge gara aga, enwere ike ịsị na ndị China amụtala imewe, anyị nweere onwe anyị iche na ha emeela ya site n'inyocha ihe ha rụpụtara, ma ha amalitela ịbụ nhọrọ dị mma na ụdị ngwaọrụ ọ bụla, ya mere zụta a. laptọọpụ chinese Ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị ekpebie n'òtù ndị na-eji asụsụ bụ ọbụna mgbọrọgwụ okwu ndị dị ka "ọ na-ada m ka Chinese", anyị ga-eme. zute nkume ụfọdụ n'ụzọ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ka ị ga-esi zere nsogbu niile ị nwere ike ịchọta na laptọọpụ ndị China na anyị ga-akọwa ihe nzuzo niile ịchọrọ ịma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta laptọọpụ na, na ihe niile nwere ike ime, ga-adị ọnụ ala karịa. Ndị enyi America ma ọ bụ ndị Japan.
1 Laptọọpụ ndị China kacha mma
2 Kedu ihe ị kwesịrị ịma tupu ịzụrụ laptọọpụ ndị China?
2.1 Ahụigodo n'asụsụ ọzọ
2.2 Nchịkọta nhọrọ ndị China
2.3 Plọg chaja adabaghị na Spain
3 Kedu ihe kpatara ịzụta laptọọpụ ndị China?
4 Ụdị laptọọpụ ndị China kacha mma
Laptọọpụ ndị China kacha mma
MEDION klaasị E11201 -...
TECLAST F15S Kọmputa ...
CHUWI HeroBook PRO bụ kọmpụta na-egosipụta nke ọma ihe akwụkwọ ndetu ndị China bụ. Maka mmalite, anyị nwere ike nweta ya maka a ọnụahịa bụ naanị 299 €, ma maka ego ahụ, anyị ga-azụta ihe nwere ụfọdụ njirimara nke ihe a maara dị ka Ultrabook: ọ bụ ìhè (1.39kg), dị gịrịgịrị ma nwee ihuenyo 14.1-inch.
N'ime, Windows 10 arụnyere na ndabara ga-akwado ya site na Intel Gemini Lake processor, 8GB nke RAM ma chekwaa ya na 256GB nke ebe nchekwa SSD, nke bụ ihe pụrụ iche mana ezuru ihe niile ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Anyị ekwesịghị ichefu na anyị na-ekwu maka laptọọpụ na 14 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo na na ọnụ ahịa ya bụ nke kacha ala ị nwere ike ịchọta.
Eziokwu bu na CHUWI laptọọpụ Ha na-enye uru maka ego siri ike ịkụ.
TECLAST F7S 14.1 bụ kọmpụta nwere ọnụ ahịa ihe ọchị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ihe niile ọ na-enye. Maka mmalite, anyị nwere a Ihuenyo 14.1 inch nwere mkpebi 1920 × 1080 (Full HD), nke ga-eme ka anyị hụ ihe niile dị mma. Ma ọ na-ebulikwa internals dị ịtụnanya na-atụle ọnụahịa ya.
N'ime, F7Plus 14.1 gụnyere Intel Apollo dị ka dum, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD, 128GB na nke a, ụfọdụ ihe na-emesi anyị obi ike na Windows 10 nke na-abịa na ndabara ga-eji nwayọọ na-agagharị. A dịghị obere mkpa nkọwa bụ na ahụigodo ahụ nwere azụ azụ, nke ga-ekwe ka anyị dee na obere ìhè ọnọdụ na-enweghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ị chere na ihe niile dị n'elu na-adọrọ mmasị gị, chere, n'ihi na ọnụahịa ya ga-eme ka ị kwenye: ị nwere ike nweta laptọọpụ a maka. erughị than 300, nke na-adịghị njọ ma ọ bụrụ na anyị na-ele ya anya mpempe akwụkwọ nkọwa.
Huawei's MateBook D5 bụ laptọọpụ na-adọrọ uche m. Ma ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-agụnye ihe ndị dị mma, nke gụnyere ha dị ka anyị ga-ekwu banyere mgbe e mesịrị; bụ nke ahụ maka ezigbo ọnụ ahịa anyị ga-ewerekwa mkpọ ngwa Ọ na-agụnye òké, nke ga-abụ nke zuru oke ma ọ bụrụ na anyị amụtaghị akụkụ mmetụ ahụ nke ọma, ekweisi ikuku nke Freebuds 3 nke ụlọ ọrụ na akpa azụ iji buru laptọọpụ ebe ọ bụla anyị chọrọ ya.
Banyere kọmpụta n'onwe ya, MateBook a nwere a 15.6 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo, nke bụ nha ọkọlọtọ nke nwere mkpebi nke ga-eme ka anyị hụ ihe niile dị mma. N'aka nke ọzọ, n'ime ya gụnyere ezigbo nhazi, dị ka AMD Ryzen 5, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD, 256 na nke a. Ngwakọta niile na-enye anyị ngwaọrụ nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla na oke ọsọ yana oke mmiri.
Matebook a dị maka ọnụ ahịa ya erughị 600€ nke mara mma n'onwe ya, mana ọ kadị karịa mgbe anyị matara na ngwa ndị ọ gụnyere na-ere ya iche maka ọnụ ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ € 300. Ọ bụrụ na-amasị gị ika, e nwere ndị ọzọ Laptọọpụ Huawei akpali nnọọ mmasị.
BMAX Y11 bụ ngwaọrụ anyị nwere ike ịkpọ Ultrabook. Ya mere, bụ 2-in-1 ma ọ bụ mgbanwe, nke pụtara, nke mbụ, na o nwere ihuenyo mmetụ na, nke abụọ, na anyị nwere ike iji ya ma dịka mbadamba ma dịka laptọọpụ. N'ezie, ha chọrọ ịmalite otu ndị nwere obere nha, ya mere ọ gụnyere ihuenyo naanị 11.6 sentimita asatọ.
BMAX Y11 Kọmputa ...
Banyere nkọwa ya, ọ pụtara maka ịbụ ngwaọrụ ọkụ n'ezie, yana ibu nke 0.45kg Nke ahụ abụghị ihe ijuanya mgbe ị tụlere nha ihuenyo gị. The Windows 10 sistemụ arụmọrụ ga-akwado ya site na Intel N4100 processor, 8GB nke RAM na diski SSD, 256GB na nke a.
Ọnụ ya bụkwa ihe ọzọ mara mma ma ọ bụrụ na anyị na-atụle na ọ bụ onye na-agbanwe agbanwe: anyị nwere ike nweta nke a 2-in-1 maka. erughị than 400.
Ọ bụrụ na ị na-achọkwu kọmputa Laptọọpụ maka ihe na-erughị € 500Agbagharala nhọrọ anyị nke ụdị kachasị mma n'okpuru ọnụahịa ahụ na njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma tupu ịzụrụ laptọọpụ ndị China?
Ahụigodo n'asụsụ ọzọ
Otu n'ime nsogbu anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị zụtara laptọọpụ ndị China bụ na igodo ya ga-adị anyị ka ọpụpụ n'ụgbọ mmiri ndị ọzọ. N'ozuzu, ahụigodo QWERTY ga-enwe ọnụ ọgụgụ igodo dị ka ahụigodo Western, mana mkpụrụedemede ga-adị ka nke ị na-ahụ na foto dị n'elu ahịrị ndị a. Gịnị ka anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị enweta nsogbu a? Ọfọn ngwọta dị mfe: dị akwụkwọ mmado, dị na ụlọ ahịa ndị pụrụ iche, nke emebere iji tinye ha na igodo. Naanị ihe anyị ga-eme bụ iji ndidi, tapawa onye ọ bụla n'ọnọdụ ya. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ileba anya ka igodo dị na laptọọpụ ọzọ ma ọ bụ mado ha ka anyị na-enyocha igodo nke ọ bụla na nchịkọta ederede.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ihe niile dị n'elu ga-abụ ikpe ma ọ bụrụ na laptọọpụ anyị zụrụ bụ naanị maka ahịa ndị China. Ọ bụrụ na e nwere a ụdị nke ụwa ma ọ bụ nke Europe, a ga-emegharị ahụigodo ka ọ bụrụ mpaghara anyị.
Nchịkọta nhọrọ ndị China
Anyị nwere ike ịchọta nsogbu yiri nke ahụ keyboard na nhazi menus na akụkụ niile nke sistemụ arụmọrụ. O yikarịrị ka mgbe anyị zụtara laptọọpụ na China, ihe mbụ anyị na-ahụ mgbe anyị gbanyere ya bụ nke ahụ ihe niile dị na Chinese. Ọdachi!.. ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ ọ gụnyere bụ Windows, naanị ihe anyị ga-eme bụ were kọmpụta ọzọ nwere otu sistemụ wee hụ ebe anyị ga-esi tinye ngwugwu n'asụsụ anyị ma ọ bụ chọọ ozi dị na ịntanetị iji mee ya.
Ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ bụ ihe ọzọ karịa Windows, ọ kacha mma chọọ ozi na Google, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sistemụ arụmọrụ ọ bụla dabere na Linux enwere ike itinye ya na Spanish ma ọ bụ, ọ dabara nke ahụ, na Bekee. O yikarịrị ka anyị ga-etinye oge na-agbalị, mana ọ ga-ekwe omume na ịtụle ọnụahịa ahụ, mgbalị ahụ nwere ike ịba uru.
Dị ka ọ dị na ahụigodo, ịsị na ọ ga-ekwe omume na laptọọpụ ndị China nwere a nsụgharị ụwa Na ekwe omume na ihe niile dị n'asụsụ anyị ma ọ bụ na English enweghị ike ịpụ ozugbo na igbe.
Plọg chaja adabaghị na Spain
Ọ bụrụ na enwere ụdị zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ anyị zụtara laptọọpụ ndị China na ụlọ ahịa Europe ma ọ bụ Spanish, ọ gaghị enwe nsogbu. Mana ọ bụrụ na ihe anyị na-azụta bụ kọmpụta a na-ere naanị na China, n’ihe niile gbasara omume anyị ga-azụta kọmpụta nwere chaja nke anyị agaghị enwe ike itinye n’ime igwe ọkụ anyị. Nsogbu a dị mfe iji dozie: naanị anyị ga-aga ụlọ ahịa pụrụ iche, na e nwere online, na zụta ihe nkwụnye ihe nkwụnye ego nke china-Europe. Nke a adịghị nnọọ iche na ihe anyị na-eme ma ọ bụrụ na anyị nwere a ọhụrụ (abụba) njikọ / nwoke na anyị chọrọ jikọọ ya na mkpa plọg. Naanị ihe dị iche bụ na njikọ China adịghị ka ihe anyị na-eji na Europe.
Site na nkwa ị ga-akpachara anya. Enwere ụdị na-arụ ọrụ naanị na mba ụfọdụ, ma ọ bụrụ na anyị azụta ngwaọrụ n'aka ha wee bupụ ya n'ebe ahụ, anyị ga-alaghachi obodo ya iji nweta nkwado. Iji zere nke a, anyị nwere ike ịzụta ihe gị na ụlọ ahịa etiti, dị ka Amazon. Nnukwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-enye, na mgbakwunye na ngwaahịa ndị a na-ere n'onwe ha, ihe ndị a na-ere site na ụlọ ahịa ndị dị n'èzí, ya mere, ọ bụrụ na ụlọ ahịa X na China na-ere anyị ihe site na Amazon, anyị ga-anụ ụtọ, ma ọ dịkarịa ala, nkwa nke Amazon.
Onwe ya, Agaghị m akwado ịzụrụ laptọọpụ ndị China na China ọ gwụla ma anyị gara ọtụtụ njem n’ebe ahụ ma mụta asụsụ ahụ. N'aka nke ọzọ, ụlọ ahịa dị ka Amazon na-enye ọrụ ịre ahịa mgbe ọ gasịrị nke na-abụghị nke abụọ.
Kedu ihe kpatara ịzụta laptọọpụ ndị China?
Isi ihe kpatara ịzụta laptọọpụ ndị China bụ ụgwọ ya. Dị ka anyị kọwara na mmalite nke isiokwu a, China dị ọhụrụ na mmepụta nke ngwá electronic, ma ọ bụ karịa kpọmkwem na nhazi na mmepụta nke otu; Ha na-eme ha kemgbe ọtụtụ iri afọ. Dị ka ahịa na-eto eto, na ihe anyị nwekwara ike ikwu "na-apụta", ọnụ ahịa ya dị ala karịa nke ahịa na mba ndị nwere ike ụwa, dị ka United States, Germany ma ọ bụ Japan.
Laptọọpụ ndị China dị n'ụdị niile. N'otu aka ahụ, anyị nwere ụdị ama ama dị ka Xiaomi o Huawei nke na-emekarị ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ma n'aka nke ọzọ anyị nwere Chinese ìgwè na-echetara anyị ihe anyị na-ahụ na otu narị dum. Ihe dị mma banyere nke ikpeazụ bụ na ọnụahịa ha ga-adị ọbụna ala, ma ihe ọjọọ bụ na ha abụghị nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ga-adịru ọtụtụ afọ na-arụ ọrụ zuru oke.
N'ozuzu ma ọ bụrụ na anyị ahọrọghị akara a na-amaghị, ihe anyị ga-enweta mgbe ịzụrụ laptọọpụ ndị China ga-abụ akụrụngwa nke ga-arụ ọrụ nke ọma na nke anyị ga-akwụ obere obere na ihe anyị ga-akwụ ma ọ bụrụ na ihe anyị na-ahọrọ bụ a apple laptọọpụ o HP.
Ụdị laptọọpụ ndị China kacha mma
Chuwi bụ ụlọ ọrụ China hiwere na 2004, yabụ anyị nwere ike ịsị na ọ ka dị obere. Ha na-ekwu, ebumnuche ha bụ ịgbanwe ụwa, maka nke a, ha na-emepụta ngwaọrụ ndị nwere ezigbo uru maka ego. Ha na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mba, yabụ na ọ gaghị abụ nsogbu iji akwụkwọ ikike ha.
Na katalọgụ nke Chuwi laptọọpụ anyị hụrụ laptọọpụ bụ a ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị anaghị achọ oke na anyị chọrọ inwe ihe a na-anakwere na-enweghị ime nnukwu ego.
Hụ kọmpụta Chuwi niile
Huawei bụ akara na-eto eto nke nwetara ọtụtụ ewu ewu n'ime afọ iri gara aga, karịsịa maka ngwaọrụ mkpanaka ya. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ China kacha mkpa zuru ụwa ọnụ ma nwee ụlọ ahịa anụ ahụ n'ọtụtụ mba, dịka Spain.
Na katalọgụ ya Laptọọpụ Huawei Anyị na-achọta ụdị ihe teknụzụ dị iche iche, n'ime nke anyị nwere laptọọpụ bụ nhọrọ dị oke mma maka uru ha bara maka ego.
Hụ laptọọpụ Huawei niile
Xiaomi bụ ụlọ ọrụ ahụ na 2020 afọ 10 gara aga, yabụ anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ China nke ka nọ na nzọụkwụ mbụ ya. Ọ malitere, karịa ihe niile, na smartphones, ma ọ na-arụpụtala ụdị ngwaọrụ dị iche iche, n'ime nke anyị nwere elekere, mbadamba nkume, igbe igbe, telivishọn na ụfọdụ laptọọpụ ndị nwere nhazi yiri nke ụlọ ọrụ a ma ama na-eji. apụl dị ka logo. N'ime laptọọpụ nke ika China a, anyị ga-ahụ ihe niile, ụfọdụ dị ọnụ ala na ndị ọzọ dị ike, ma ha niile nwere ezigbo uru maka ego.
Teclast bụ ụlọ ọrụ China na-arụ ọrụ karịa mba 33. Ọ bụ ọkachamara na ngwaọrụ mkpanaka, batrị, ngwaọrụ nchekwa yana kwa laptọọpụ, nke 2-na-1s gụnyere (mbadamba + PC). Na katalọgụ laptọọpụ gị Anyị na-achọta ngwaọrụ dị iche iche, ma ha niile na-enye ezigbo uru maka ego.
Hụ kọmpụta Teclast niile
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Laptọọpụ ndị China